Ezi zibini zikholelwa ekusebenzeni kanzima, zidlala nzima.
U-Leo kunye neVirgo bangabamelwane kwivili lesodiac kwaye babelana ngezici zokuba kakhulu malunga nento yonke.
Kukho ithuba lokuhlalisana ekhaya xa uLeo noVirgo badibana kwii-degrees ezikufutshane. Hlola isiqulatho selanga ngenxa yexesha elidlulileyo le-Leo kunye ne-Virgo yokuqala baye babelana ngezinto ezininzi.
Kukho I-Chance for Harmony yasekhaya
ULeo ufumana ukuxhamla kwi-Virgo yenkxalabo ekhethekileyo, kwaye lonke uthando lukaLeos luziva lukhethekileyo.
Bobabini baqhayisa ngokubukeka kwabo, kwaye njengokuba isibini siya kubetha abanye kunye nokudibanisa. Uninzi lweVilgiji lukhanyisa ukucoceka okuntle, ngelixa uLoan ekwazi ukuza kuhlobisa aze afake iphunga elikhethiweyo.
I-Virgo ithandwa ngumntu kaLeo wokuba nesithunzi kunye nokuzikhukhumeza, ngakumbi ukuba kukho ukuqeqeshwa ukubuyisela intetho enkulu. Bobabini balahlekelwa intlonelo ngabanqabileyo, kwaye nabo baphupha. Belana ngesimo sengqondo esisebenzayo esinika umgca wokuphumelela kwangempela.
Uthando othandweni lukaLobert wenza ingxabano enkulu phezu kweeholide kunye nokuzalwa kunye nokuziphatha okukhethekileyo.
I-Virgo ethandweni inokuba yintloni kodwa ibonisa uthando ngokuba khona imihla ngemihla.
Umntwana ovuyayo kunye noPhefectionist?
U-Leo unokufumana iVirgo into encane kodwa uya kuqonda ukuba kunokwenzeka into enokuhlala ixesha elide kwaye yenzeke apho. U-Leo ukhuthaza iVirgo ukuba yinkwenkwe kwaye ithathe ikhefu kwizicwangciso zokuziphucula. I-Virgo ibonisa ukuba u-Leo unomdla wokubaluleka ukuze ulandele indlela efanelekileyo.
ULea oqhayisayo wenza ukuba iiVirgi zibukeke ngathi azizithengi, kwaye zixhaphaza imilomo yazo kwisigwebo. Inselele enye ye-Virgo kukuba iphumelele nayiphi na into yokuzigxeka kwaye ikhanye ngendlela. Intshisekelo yendalo kaLeon ivuselela ukuba eVirgo, ngakumbi xa yenziwa ngentliziyo ecocekileyo.
Ngakolunye uhlangothi, uLoon unokufumanisa ukuba ukuthobeka kweVergo imvula kwi-parade yabo.
U-Leo unokwabelana ngephupha elikhulu, kwaye uVirgo ubonisa ngokukhawuleza ukungaqiniseki kunye neengxaki ezithile zokunqoba.
Oku kunokuba isipho xa iVirgo isekela amandla kaLoan ukuphupha enkulu kunye nokulinganisela ukusuka kwicala elisebenzayo. I-Virgo ibonisa uLowe ukuba yenze njani ngokwenene, kunye namanyathelo amancinci amancinci.
Yonke imisebenzi kunye nayo yonke imidlalo?
UVirgo akayikukhumbuza ekuthunjeni ekukhanyeni kukaLoon, nje kuphela ukuba babonwa njengabalingani abalinganayo. Xa uLee ehlonipha izipho ezivulekileyo zikaVirgo, zenziwe. Ukuba uLeo uyisichitha-in-holic, iVirgo ixhomekeke ekukhoneni iipennies. Oku kungaba ngumthombo wobambano, ngakumbi ukuba i-number-cruncher Virgo igxininisa imali yezindlu.
Iso lenyameko leVirgo liza ukuphupha amaphupha abe ngamanyathelo. ULeo ufumana umbono onokwenene, kwaye ngokuqinisekileyo, akavumeli ukuba le nto ithathe umoya ngaphandle kweendlela. I-Virgo kunye no-Leo banokuyenza yonke imihla imilingo kodwa ivelise. Zomibini iimpawu zokuthanda ukuphumelela nokubona imivuzo ebonakalayo kumsebenzi wabo onzima. Ihlazo likaLobert liphelile kwaye linceda iVergium zihleka. Kwaye iVirgo ibonisa iNgonyama ukubaluleka komonde ekufumaneni into ayifunayo.
U-Leo onqwenela ingqwalasela unokucinga ukuba i-Virgo ijonge, okanye ibaluleke nakakhulu.
Kodwa xa uVirgo enika uncomelo, uLoon uyazi ukuba unyanisekileyo, ukubonakalisa iliso elinyamekisayo le-realist. Ngale ndlela, uLoan unokuthembela kuVirgo ngengxelo ephilileyo.
Udlala, uthando uLeo uvelisa ubunjani beNtombi. Uhlobo luka-Leo olungenakunqanda uthando luye lunceda iVrogo ukuphumla kwixesha elithandanayo, kwaye ilahlekelwe yodwa kumzuzwana.
I-Virgo ingasoloko igxuma phezulu iphantsi phantsi ngenzondelelo, kodwa ukuhlala kwayo ngokuqhubekayo kunenani elingaphezu kwe-ego stroking. Iphupha likaLowo lokunyamezela uthando lingazaliseka ngeVirgo, ogqibeleleyo uthetha izithembiso. Le ngqungquthela ikhula xa isekelwe kwiinkcukacha zobomi bemihla ngemihla, ihlanjululwe ngamaxesha okuzonwabisa.
U-Leo kunye ne-Virgo Phezulu: Ukuzinikela okufanayo, ukunyaniseka komsebenzi, ukulungiswa kwemisebenzi, ukuzimisela, ukupakisha umhla ngemizamo yokuvelisa, abathandi abanomdla, abanomdla ngexesha kunye nezipho, abazali abanomdla, bobabini banenkxalabo ngempilo nangobunzima.
ULeo kunye neVirgo Ngaphaya: Bobabini bebukeka bebukeka bebodwa , bazibhokoxa, bazinzima kunye nabanye, banganeliseki.
Umnyama omnyama kaLeo
Icala elimnyama leVirgo
Lo mdlalo udibanisa: I- Fixed Fire (Leo) kunye neMetable Earth (Virgo).
Imifula emihlanu ye-Greek Underworld
Ikholomu - Iintlobo kunye neeStyles
I-Iowa State Admissions